किन यसरी हुंदैछ ? जि*उँदै पु*र्दै गरिएको गाईको उ*द्दार, पुर्ने पाँचजना पक्राउ « Channel Np
किन यसरी हुंदैछ ? जि*उँदै पु*र्दै गरिएको गाईको उ*द्दार, पुर्ने पाँचजना पक्राउ
नुवाकोट । नुवाकोटको विभिन्न स्थानबाट गाई संकलन गरि चीनको केरुङ पुराउने गि*रोहलाई शनिवार जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटले विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरेको छ ।फक्राउ पर्नेमा म्यागङ गाउँपालिका वडा नम्बर ३ काहुलेका ३५ वर्षिय राज तामाङ र ५५ वर्षिय आइत तामाङ रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटले जानकारी दिएको छ । अन्य तीन जनाको भने नामा ठेगाना प*त्ता लागेको छैन । पक्राउ परेका तामाङद्धयलाई बट्टार हावाघरबाट स*मातिएको हो भने अनय तीन जनालाई वेत्रावतिबाट समातिएको प्रहरीले बताएको छ ।
शनिबार विहान विभिन्न स्थानबाट गाई त*स्करहरुले बट्टारको हावाघरमा करिव एक दर्जन गाई, र बाच्छाबाच्छी ल्याएर छा*डेका थिए । केही गाईलाई तिमध्ये केही गाई हिलोको दलदलमा फ*सेको थियो । दलदलमा फ*सेको गाईलाई उ*द्धार देविघाटमा रहेको जबरजंग गणका सेना, नेपाल प्रहरी र स्थानिबासीले गरेका थिए ।गाईलाई उ*द्धार गर्न अस्थाई प्रहरी पोस्ट बट्टार वसपार्कका इन्चार्ज केशवमान डंगोलसहितको टोली दिनभर स*क्रिय भएका थिए । दिनभर गाईको उ*द्धारमा खटिएका छौ, दुई जनालाई नि*यन्त्रणमा लिएर अ*नुसन्धान शुरु गरेका छौ अस्थाई प्रहरी पोस्ट बट्टार वसपार्कका इन्चार्ज केशवमान डंगोलले भने ।
उनले आफुहरु उ*द्धारमा आउँदा गाई खा*ल्डोमा रहेको बताए ।त्यस्तै स्थानियबासी मुरारी नेपालले प्रहरी र सेनाको सहयोगमा केही गाईको उ*द्धार गरिएको बताए । जि*उँदै गाईलाई पु*र्दै गरेको स्थानीयले थाहा पाएपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए ।उनले गाई केरुङतर्फ निकास गर्न खोजिएको भन्ने जानकारी आएकोले घ*टनाको शु*क्ष्म अ*नुसन्धान हुनुपर्ने बताए । उ*द्धार गरिएको करिव एकदर्जन गाईहरु हावा घरमा रहेको कि*रियापुत्रीको भवन निर्माणस्थलसँगै राखिएको छ । उ*द्धार गरिएको गाईलाई के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।